စားသောက်မှုပုံစံ – Page2– My Doctor
You are here:Home-All Articles-အလှအပနှင့်နေထိုင်စားသောက်မှုပုံစံ-စားသောက်မှုပုံစံ
By tayzar|2020-03-16T02:09:23+00:00February 11th, 2019|Categories: All Articles, စားသောက်မှုပုံစံ, အထွေထွေ, အထွေထွေရောဂါများ, အလှအပနှင့်နေထိုင်စားသောက်မှုပုံစံ|
ရေနွေးကြမ်း၏ ကောင်းကျိုးများ ရေနွေးကြမ်းဆိုတာ မြန်မာတို့ အနှစ်သက်ဆုံး ထဲက တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ထမင်းပွဲတိုင်း၊ ဧည့်ခံပွဲတိုင်း၊ အချိုပွဲတိုင်း မပါမဖြစ် ဖြစ်ပါတယ်။ ရေနွေးကြမ်းနဲ့မြန်မာ့ဓလေ့ ဟာ ခွဲမရခဲ့တာ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်းများစွာ ကတည်းကပါပဲ။ မြန်မာရေနွေးကြမ်းဟာ ဆေးဖက်ဝင်ပါတယ်။ ကောင်းကျိုးတွေလည်း များစွာရှိပါတယ်။ လူကြီးတွေ အများအားဖြင့် ပိုနှစ်သက်ကြပါတယ်။ အင်္ဂလိပ် အခေါ် Tea မှာ မျိုးကွဲပေါင်းများစွာ ရှိပေမယ့် မြန်မာ့ ရေနွေးကြမ်းကတော့ လက်ဖက်ခြောက် ကို ဆိုလိုတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အခါးရည်၊ အဖန်ရည် စသဖြင့်လည်း ခေါ်ကြပါတယ်။ လက်ဖက်စိမ်းကို နေလှမ်းအခြောက်ခံထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ Green tea နဲ့မတူပါဘူး။ မြန်မာ့
By tayzar|2020-03-25T08:23:14+00:00January 18th, 2019|Categories: All Articles, စားသောက်မှုပုံစံ, အလှအပနှင့်နေထိုင်စားသောက်မှုပုံစံ|
ဟင်းနုနယ်၏ ကောင်းကျိုးများ Spinach ခေါ် ဟင်းနုနယ်ဟာ တစ်နှစ်ပတ်လုံး ပေါက်တဲ့ အပင်ဖြစ်ပြီး အရွက် ကို ဟင်းသီးဟင်းရွက် အနေနဲ့စားသုံးကြပါတယ်။ အစိမ်းဖြစ်စေ၊ ကြော်ချက်၍ ဖြစ်စေ၊ Juice လုပ်သောက်တာ ဖြစ်စေ၊ အအေးခံပြီး Canned လုပ်တာဖြစ်စေ နည်းမျိုးစုံး စားသုံးကြပါတယ်။ အစိမ်းရင့်ရောင် ရှိတဲ့ ဟင်းနုနယ် အရွက်ဟာ တစ်နေ့တာ စားသုံးသင့်တဲ့ အာဟာရ အုပ်စုတွေထဲ အပါအဝင် ဖြစ်ပါတယ်။ အနည်းငယ် စိမ်းရွှင်ရွှင် အနံ့အရသာ ရှိတာကြောင့် ကလေးတွေနဲ့ လူကြီး တစ်ချို့မနှစ်သက်ကြပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အာဟာရဓာတ် ကြွယ်ဝတဲ့ ဟင်းနုနယ်ကို လူတိုင်း စားသုံးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။ ဟင်းနုနယ်ဟာ ဟင်းသီးဟင်းရွက်
By tayzar|2020-04-01T09:57:54+00:00January 14th, 2019|Categories: All Articles, ကလေး ကျန်းမာရေး, စားသောက်မှုပုံစံ, နေထိုင်မှုပုံစံ, မိခင်နှင့်ကလေးကျန်းမာရေ, အလှအပနှင့်နေထိုင်စားသောက်မှုပုံစံ|
ကလေးနှင့် ပျားရည် ပျားရည်ဟာ အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ သဘာ၀ အစားအစာဖြစ်တာကြောင့် ကျန်းမာရေး အတွက်သင့်တော်တယ်ဆိုတာ သိကြပါတယ်။ သဘာဝက ရတဲ့ အချိုဓာတ်အပြင် တခြား အာဟာရဓာတ်တွေပါ ပါဝင်နေတာကြောင့် လူကြီးလူငယ်မရွေး သုံးစွဲကြပါတယ်။ ပျားရည်ကို ဒီတိုင်းစားကြတဲ့ အပြင်၊ ဒိန်ချဉ်နဲ့ရောသောက်တာ၊ မုန့်တွေလုပ်တဲ့ နေရာမှာ၊ ဆေးဖော်တဲ့ နေရာမှာတွေပါ အမျိုးမျိုးသုံးစွဲကြပါတယ်။ စွယ်စုံသုံးလို့ရတဲ့ ပျားရည်ကို သဘာ၀ အတိုင်းရော၊ မွေးမြူရေးပျားတွေကနေပါ ရရှိနိုင်ပါတယ်။ ပျားရည်ရဲ့အချိုဟာ Monosaccharides fructose နဲ့ Glucose က ရရှိပါတယ်။ ပျားရည် ထမင်းစားဇွန်း ၁ ဇွန်းမှာ ကယ်လိုရီ ၄၆ ပါဝင်ပါတယ်။ ပျားရည်ဟာ ဆေးဖက်ဝင်ပါတယ်။
By tayzar|2020-05-05T07:56:33+00:00January 14th, 2019|Categories: All Articles, ကလေး ကျန်းမာရေး, စားသောက်မှုပုံစံ, နေထိုင်မှုပုံစံ, မိခင်နှင့်ကလေးကျန်းမာရေ, အလှအပနှင့်နေထိုင်စားသောက်မှုပုံစံ|
By tayzar|2020-03-16T02:25:08+00:00December 15th, 2018|Categories: All Articles, စားသောက်မှုပုံစံ, အထွေထွေရောဂါများ, အလှအပ, အလှအပနှင့်နေထိုင်စားသောက်မှုပုံစံ|
ငါးကြီးဆီ Fish oil ကတော့ လူတော်တော်များများ ကြားဖူးသိဖူးကြမှာပါ .. တကယ်တော့ မြန်မာလူမျိုးတွေက ဟိုးအရင်ခေတ်တွေထဲက ကျန်းမာရေးကောင်းအောင်လို့စားခဲ့ကြတာပါ ... ရှေးမြန်မာကြီးတွေလက်ထက်ကတည်းက စားသုံးခဲ့ကြတဲ့ ငါးကြီးဆီပါပဲ ... အဲ့ဒီခေတ်တွေတုံးကတော့ နည်းပညာမတိုးတက်သေးတော့ အနံ့နံပါတယ် ... ခေတ်တွေတိုးတက်တာနဲ့အမျှ စားသုံးရလွယ်ကူအောင်ထုတ်လာကြတာပေါ့နော် :-D ဒီဆောင်းပါးမှာတော့ ငါးကြီးဆီမှာ လူ့ခန္ဓာကိုယ်အတွက် အကျိုးအရှိဆုံးဖြစ်တဲ့ omega3fatty acids အကြောင်းကိုပြောပြသွားမှာပါ ;-) Omega3fatty acids မှာ EPA (eicosapentaenoic acid) နဲ့ DHA (docosahexaenoic acids) တို့ပါဝင်ပါတယ် omega 3
By tayzar|2020-01-28T02:21:43+00:00November 28th, 2018|Categories: All Articles, စားသောက်မှုပုံစံ, အထွေထွေ, အထွေထွေရောဂါများ, အလှအပ, အလှအပနှင့်နေထိုင်စားသောက်မှုပုံစံ|
ပျားရည်သံပုရာက တကယ်ပဲ ဗိုက်ချပ်စေသလား? ပျားရည်သံပုရာနဲ့ဗိုက်ချပ်အောင်လုပ်တဲ့နည်း ဝိတ်ချတဲ့နည်း ကတော့ မိန်းကလေးတွေကြားမှာ တော်တော် ရေပန်းစားတဲ့ နည်းလမ်းတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ မိန်းကလေး သဘာ၀ အတိုင်း အသက်လေး နည်းနည်းကြီးလားလို့ဖြစ်ဖြစ်၊ အစားလေး နည်းနည်းများများ စားမိရင် ဖြစ်ဖြစ်၊ ရုံးမှာ အထိုင်များတာဖြစ်ဖြစ် ဗိုက်ခေါက်လေးထွက်လာတတ်ပါတယ်။ လူပိန်ရင်တောင် ဗိုက်လေးထွက်နေတတ်ကြပါတယ်။ မြန်မာမိန်းကလေးတွေ ရဲ့ သဘော အရ လုံချည်ဝတတ်တဲ့ အခါ ခါးလေး သိမ်ပြီး ဗိုက်လေးချပ်နေမှ မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်မှု ရှိတာ ဖြစ်တဲ့ အတွက် လူ မပိန်ရင်တောင် ဗိုက်ကလေး ချပ်နေချင်တတ်ကြပါတယ်။ လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ဖို့ကလည်း အချိန်မပေးနိုင်တာတွေ၊ ပျင်းတာတွေကြောင့် အလွယ်နည်း
By tayzar|2020-03-20T04:16:45+00:00November 18th, 2018|Categories: All Articles, စားသောက်မှုပုံစံ, အလှအပ, အလှအပနှင့်နေထိုင်စားသောက်မှုပုံစံ|
ဒိန်ချဉ်မှာ ဘယ်လိုကောင်းကျိုးတွေရှိလဲ ဒိန်ချဉ်ရဲ့ကောင်းကျိုးကို တော်တော်များများ သိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ လူသိများတဲ့ အချက်တွေဖြစ်တဲ့ အသားအရေလှစေခြင်း၊ ဝမ်းမှန်စေခြင်း စတဲ့ အချက်တွေရှိတဲ့ အတွက် ကျန်းမာရေး အရ အလွန်ကောင်းတဲ့ အစားအစာတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ လူကြီးကစ ကလေးငယ်များ အထိနှစ်သက်ကြပါတယ်။ ဒိန်ချဉ်ကို အစာအဖြစ်ရော ဆေးအဖြစ်ပါ စားသုံးကြတာ တွေ့ရပါတယ်။ နွားနို့ကို တစ်ချို့လူတွေ မတည့်တာတွေ ရှိတတ်ပေမယ့် ဒိန်ချဉ်ကိုတော့ တော်တော်များများ တည့်တာကြောင့် စိတ်ချလက်ချစားတတ်ကြပါတယ်။ ဒိန်ချဉ်ကို ကျန်းမာရေး ရှုထောင့်အရ လေ့လာကြပါမယ်။ ဒိန်ချဉ်မှာ ကိုယ်ခန္တာအတွက် အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ ဓာတ်များစွာ ပါဝင်ပါတယ်။ အသားဓာတ် ကြွယ်ဝပြီး သတ်သတ်လွတ်စားသုံးသူများ အတွက် အလွန်သင့်တော်တဲ့ အစားအစာ
By tayzar|2020-01-28T02:54:28+00:00November 17th, 2018|Categories: All Articles, စားသောက်မှုပုံစံ, အလှအပနှင့်နေထိုင်စားသောက်မှုပုံစံ|
"မန်ကျည်းသီး၏ အကျိုးအာနိသင်များ" မန်ကျည်းသီး....မြန်မာတို့တတွေ မန်ကျည်းသီးကို ပုံစံမျိုးစုံဖြင့် စားသုံးကြသည်။ အဓိကအားဖြင့်တော့ အချဉ်ဓာတ်လေးရရန်ငှာ ဟင်းထဲထည့်ချက်ကြသည်။ ထန်းလျက်လေးနဲ့ မန်ကျည်းသီးဖျော်ရည် ဖျော်သောက်ကြသည်။ တစ်ချို့လည်း မန်ကျည်းသီးမှည့်ကို ဆားလေးနဲ့တို့စားကြသည်။ နောက်....မန်ကျည်းတော်ဖီ...မန်ကျည်းဖလိတ်...စသဖြင့် ...အမျိုးစုံစွာရနိုင်သည်။ ကဲ...ဒါဖြင့် ....ဒီမန်ကျည်းသီးဟာ ကျန်းမာရေးရှုထောင့်ကနေကြည့်ရင်ရော စားသင့်ရဲ့လား? အကျိုးရရဲ့လား? ကြည့်လိုက်ကြဦးစို့ ! (1)မန်ကျည်းသီးဟာ အစာကြေလွယ်ပါသတဲ့။ မန်ကျည်းသီးမှာ အမျှင်ဓာတ်ကြွယ်ဝစွာ ပါဝင်တာကြောင့် ဝမ်းမှန်စေပြီး အစာကြေလွယ်တယ်။အူမကြီးကင်ဆာကိုလည်း ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ (2)သွေးပေါင်ချိန်ကိုလည်း ထိန်းညှိပေးပါတယ်။ ဆိုဒီယမ်ဓာတ်ပါဝင်မှုနည်းပြီး သွေးကြောနံရံလေးတွေကို အနားပေးခြင်းအားဖြင့် ပုံမှန်သွေးပေါင်ချိန်ရရှိစေဖို့ ကူညီပေးပါတယ်။ (3)ကျောက်ကပ်တွေရဲ့ လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကိုလည်း ပိုမိုကောင်းမွန်စေတယ်။ ကျောက်ကပ်မှာရှိတဲ့ အညစ်အကြေးတွေကို သန့်စင်ဖယ်ရှားပေးပါတယ်။ (4)ကိုယ်ခံအားလည်း တက်စေပါတယ်တဲ့နော်။ မန်ကျည်းသီးမှာ
By tayzar|2020-03-16T02:43:25+00:00November 14th, 2018|Categories: All Articles, စားသောက်မှုပုံစံ, နေထိုင်မှုပုံစံ, အထွေထွေရောဂါများ|
ကောင်းကျိုးပြု ဘက်တီးရီးယားများ နှင့် အစာမျှဉ်များ Prebiotics နဲ့ probiotics ဆိုတာတွေဟာ ယနေ့ခေတ် အစာအာဟာရပိုင်းဆိုင်ရာ နယ်ပယ်တွေမှာ လူပြောများတဲ့ခေါင်းစဉ်တွေပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ အတူတူ ခပ်ဆင်ဆင်လို့ထင်ရသော်လည်း တကယ်တမ်း လေ့လာကြည့်လျှင် နှစ်မျိုးစလုံးဟာ မတူညီတဲ့ နေရာကနေ ကျန်းမာရေးကို ထောက်ပံ့ပေးနေတယ်ဆိုတာ တွေ့ရပါလိမ့်မယ် ။ ဒီတော့ ဘာတွေဘယ်လိုကွဲပြားသလဲ ဆိုတာ ဒီအောက်မှာ ရှင်းပြ ပေးသွားမှာပါ ။ Prebiotics နဲ့ probiotics ဆိုတာ ဘာတွေလဲ ? * Probiotics ( ကောင်းကျိုးပြု ဘက်တီးရီးယားများ ) - ဒီအုပ်စုထဲ ပါတာတွေကတာ့ ဘက်တီးရီယား
By tayzar|2020-02-21T07:36:31+00:00November 12th, 2018|Categories: All Articles, စားသောက်မှုပုံစံ, အလှအပ, အလှအပနှင့်နေထိုင်စားသောက်မှုပုံစံ|